သံလွင်: ၈၈မျိုးဆက်တို့၏ အင်္ဂလန်ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးနေ့ ….
၈၈မျိုးဆက်တို့၏ အင်္ဂလန်ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးနေ့ ….
၈၈မျိုးဆက်တို့၏ အင်္ဂလန်နိုင်ငံခရီးစဉ်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သော ၂၅၊ ၆၊၂၀၁၃ နေ့၊နံနက်၈း၃၀တွင်လန်ဒန်မြို့New Cavendish လမ်းရှိ Asia House ၌ အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော မင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီး၊မင်းဇေယျ၊ကိုဌေးကြွယ်၊ကိုမြအေး၊ကိုမာကီ၊မမီးမီးနှင့်မနီလာသိန်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊Asia House မှ Chief Executive Michael Lawrence, Director Charlie Humphreys နှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလအတွင်း စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အပြန်အလှန် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ထို့နောက် Asia House တွင်ပြသနေသော Indian ပန်းချီဆရာ Ribeiro ၏ ပန်းချီကားများကို ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ နံနက် ၁၁း၃၀တွင် ဗြိတိသျှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ House of Lord ပါလီမန်မှ Member တစ်ဦးဖြစ်သူ Lord Howell နှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုရုတ်သိမ်းရခြင်းကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်တွင်းနှင့်လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအခြေအနေများ၊အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် နေ့လည် ၁၂း၃၀နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ပင် မကြာခင်ကမှ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သော နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဗြိတိသျှနိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်ဆံရေးအခြေအနေများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် နေ့လည် ၃း၀၀နာရီတွင် ဗြိတိသျှပါလီမန်၏ ဧည့်ခန်းတစ်ခု၌ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီနှင့်လေဘာပါတီနှစ်ခုစလုံးမှ ပါလီမန်အမတ်တချို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြရာ ၎င်းတို့က ၈၈မျိုးဆက်တို့၏ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကို အလေးနက်ထား မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ညနေ ၄း၁၅နာရီတွင် လန်ဒန်မြို့၊ဒေါင်းနင်းလမ်း၊အမှတ်(၁၀)ရှိ ၀န်ကြီးချုပ်နေအိမ်ရုံးခန်းသို့ရောက်ရှိပြီး Chief of staff ဖြစ်သူ Mr Ed Llwellyn နှင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ရင်း လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေများနှင့် လာမည့်၂၀၁၅ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် အမြင်များကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်များသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်၍ ည ၉း၃၀နာရီလေယာဉ်ဖြင့် လန်ဒန်မြို့၊ဟိသရိုးလေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ၈၈မျိုးဆက်တို့၏ ခရီးစဉ်အတွင်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်မြန်မာမိသားစုများက ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာဖြင့် အကူညီများပေးခဲ့ကြပါသည်။
at 6/27/2013 10:34:00 AM
▼ 06/23 - 06/30 (38)
ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ဆိုင်ကယ် အဖမ်းအဆီး
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မ...
''မျိုးစောင့် ဥပဒေ'' ကို ကန့်ကွက်သည့် အမတ်ကို ၂ဝ၁၅...
သုဝဏ္ဏဘူမိမြို့ဟောင်း မိုးကုန်လျှင် စတင်တူးဖော်မည်
ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနှင့် သဘင်ပညာရှင်များစွာ ပါဝင်သော ရန်...
အရက်မူးပြီးစကားများရာက လူသတ်မှုဖြစ်Friday, June 28,...
ဆက်သွယ်ရေးတင်ဒါရွေးချယ်မှု ဆိုင်းငံ့ရန် အဆိုတင်သွင်...
ငွေကြေးအများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထာ...
အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ပုထုဇဉ် လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်
နောက်ကြောင်းမပြန်ရေး စိန်ခေါ်မှု ၁ဝ ချက်
မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုကို မထိန်းသိမ်းက ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စ...
ဗီအိုအေ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအပေါ် ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင...
Samsung နှင့် အကျိုးတူ ပူပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် Faceb...
ရာဘာပင်စိုက်ခွင့်ရ တောသစ်ပင်များကို ထင်းအတွက် ရွာသ...
နိုင်ငံရေးလွန်ပွဲ အီဂျစ်ကို ခြိမ်းခြောက်
လိင်တူ လက်ထပ်မှု ချိုးနှိမ်တဲ့ ဥပဒေ ဖျက်
သြစတြေးလျ လေဘာပါတီ ခေါင်းဆောင်သစ်
မူးယစ်ဆေးအန္တရာယ် ကုလ သတိပေး
သမ္မတ အိုဘားမား အာဖရိက ၃ နိုင်ငံ ခရီးစဉ်စတင်
၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာဖို့ Kevin Rudd ဒီနေ့မှာ ကျမ်ြး...
တီဗက်ဇ်ကိုခေါ်ယူရန် ဂျူဗင်တပ် သဘောတူညီမှုရ
မင်ဒဲလား လက်ရှိကျန်းမာရေး အခြေအနေ စိုးရိမ်နေကြ
တရုတ်နိုင်ငံ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်တိုက် ဆရာတော် လယ်ယာသုံး စ...
CNG ဈေးမြှင့်ရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရထံ တင်ပြထားဟုဆို
မျိုးစောင့်ဥပဒေအတွက် လက်မှတ်စုဆောင်းခဲ့ကြသည့် သံတွ...
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှေ...
ဖမ်းဝရမ်းကို ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်သော အမျိုးသားတစ်ဦး...
ရေချိုငါးသလောက် မျိုးတုံးလုနီး ရှားပါး
ဘာသာတရားမှာ ယုံကြည်မှုသာ အဓိကဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ...
မျိုးစောင့် ဥပဒေကို သဘောမတူဟု မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေ...
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဝန်ကြီးတွေ ဗဟိုကော်မီတီကနေ နုတ်ထွက်
ရီးရဲလ် အန်စလော့တီနှင့် ရှေ့ခရီးဆက်တော့မည် Wednes...
ငွေကြေးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ တရားမဝင်နည်း...
မြန်မာ့ ပညာရေး မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဇူလိုင်တွင် စတင်ကူည...